A ga-enyocha Tesla maka ihe ọghọm na Model X | Akụkọ akụrụngwa
A ga-enyocha Tesla ọzọ mgbe ọ daba na Model X
Ọ dị ka ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya agaghị agafe oge kachasị mma. Ọ bụrụ na nso nso a ọ bụ Uber nọ na Chakwasa ihie maka ọghọm ya na nsogbu ndị gara aga, ugbu a, oge eruola tesla. United States National Transportation Safety Board (NTSB) na-enyocha ụlọ ọrụ ugbu a maka a ọghọm na California na Model X.
O doro anya Tesgbọ ala Tesla nwere ihe ọghọm na Machị 23. N'ime ihe ọghọm a o jikọtara ya na ihe mgbochi n'okporo ụzọ, nke kpatara ọkụ nke ahụ ejedebe ọnwụ nke onye ọkwọ ụgbọ ala. Ndi otu a choro ichoputa ihe kpatara ihe mberede ma si otú a choputa uzo esi ewepu Model X site na ihe mberede.
Ihe a na - enweghị ike ikwenye ugbu a bụ ma ọnọdụ ọkwọ ụgbọ ala na - arụ ọrụ n'oge ihe mberede ahụ. Tesla dị njikere ịkwado ndị isi na nyocha nke ihe mberede ahụ. Ya mere, anyị nwere ike ịmatakwu banyere ya n'oge na-adịghị anya.
Ọ bụrịrị nyocha nke atọ nke ụlọ ọrụ ahụ site n'aka bọọdụ ahụ. Ugbua na 2016 na mmalite nke afọ a emeela nchọpụta gara aga. Ha niile mgbe ihe ọghọm jiri ụgbọ ala ụlọ ọrụ. Ya mere site n’oge ruo n’oge ihe na-ada.
Ọzọkwa, na ihe ọghọm gara aga ọkwọ ụgbọ ala n'ụdịrị ahụ jiri ọnọdụ autopilot. Ihe ọghọm ndị a enyerela aka ịkọwapụta oke ike n'ụzọ dị otu a. Ihe nke Tesla maraworị ma a na-atụ anya na a ga-enwe ndozi na ya.
Mgbe ihe mberede Uber gasịrị, Ihe ọghọm Model X ọhụrụ a abụla nnukwu ihe ndọghachi azụ na ụgbọ ala kwụụrụ onwe ya. N'ezie, ọtụtụ ụdị akwụsịla ule ha n'ụdị ụgbọ ala a. Ebe ọ bụ na ihe ọghọm ọhụụ nwere ike ime. Yabụ, a ka nwere ọtụtụ ihe iji melite n'ụgbọala ndị kwurula.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » A ga-enyocha Tesla ọzọ mgbe ọ daba na Model X
Sharkoon Shark Mpaghara H40, anyị nwalere ekweisi egwuregwu eji ejiji
Xiaomi Mi Gaming Laptọọpụ, laptọọpụ ika maka ndị egwuregwu